Fintino ny valin'ny fomba Coff hametrahana labiera amin'ny kafe-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Fintino ny valin'ny fomba Coff hametrahana kafe amin'ny kafe
Fotoana: 2020-07-10 Comment: 82
Amin'ny maha-mpitia kafe ahy dia tiako ny fizotran'ny famokarana kafe kaopy sy toy ny labiera fanaovana labiera. Nandany fotoana be dia be aho nijery ny fizotran'ny labiera momba ny fomba fanaovana labiera amin'ny kafe. Ka ho an'ireo liana dia manomboka ny lalako aho.
Toeram-pisotroana fanamafisana menaka Thermail 1BBL
Unitank fanamoriana herinaratra electika
Raha ny marina dia nanao hadisoana be dia be aho tao anatin'ilay dingana, eto dia faly aho mizara aminareo rehetra.
Fanontaniana: nasiako kafe tamin'ny fotoana nandrahoana.
Valiny: Diso, ny kafe misy menaka betsaka ao aminy izay mety hisy fiantraikany amin'ny fitazonana ny loha raha asiana rano mafana.
Fanontaniana: Azoko atao ve ny manandrana kafe eo noho eo satria ho ambany dia ambany ny atin'ny solika?
Valiny: Ny kafe eo noho eo dia tsy matsiro satria ny kafe dia tsy hihatsara amin'ny majika rehefa ampiana labiera.
Fanontaniana: Inona no maha samy hafa ny tsaramaso maina sy ny kafe mifototra?
Valiny: Ny kafe an-tany dia misy orona kafe somary malefaka ihany fa ny tsiro ny kafe kosa nohazavaina. Ny tsaramaso maina kosa dia ny mifanohitra amin'izay, ny fofona dia matanjaka amin'ny voankazo misy voankazo, saingy tsy dia misy fofona kafe mahavoky.
Soa ihany aho fa afaka miara-miasa amin'ny labiera eto an-toerana, ary nanandrana tamin'ny fomba fampidirana kafe sy labiera isan-karazany. Hiresaka momba ny foto-piainan'ny labiera fototra hafa aho. Inona ny hevitrao? Zarao amiko ny zavatra niainanao amin'ny fomba fanaovana labiera amin'ny tsiro samihafa aaron@nbcoff.com, Hamaly anao eo noho eo aho.
Previous: Fiarahabana ho an'ny mpisotro labiera kely sy mahaleo tena
Next: Serivisy ara-bola ho an'ny filan'ny mpanjifa tsirairay